China Good Quality 10kva Isigaba esinye Cwaka Diesel Generator Ukwenziwa kunye Factory | Saselux
Ikaliwe Amandla （kva）: 10
Ukulinganiswa kweMveliso eyiVolthi (V): 230
Ukuphindaphinda （hz）: 50
Isantya esikaliwe (ngomzuzu): 3000
Ikaliwe amandla ombane: 0.8, Lag ngasemva）
Ikaliwe ngoku （A）: 14.4
Iklasi yokugquma: Udidi H
Iklasi yokukhusela: IP23
Imo uxhulumaniso: zigaba ezintathu-inkqubo ezintlanu-iingcingo
Ubunzima beyunithi: 150
Ubungakanani beyunithi: 850/600/800
INoisedB (A): 69
Ukusetyenziswa kwepetroli (g / KWH): 208
Imowudi yokuqala / yokumisa: Ukuqala kombane
Ixesha lokulungiswa ngokutsha kweyunithi （H）: ＞ 10000
Imowudi yokulawula isantya
Ulawulo lwesantya sombane
Sebenzisa utshintsho lweoyile ye-injini, izihluzi zedizili kunye neefilitha zomoya
Ipompo yokuhambisa umbhobho kunye nemoto
Sebenzisa ukusebenza kokunciphisa ingxolo ephezulu kwimizi-mveliso, emva kokungasebenzi, ingxolo yeyunithi inokucuthwa nge-15 ~ 20dBA
Ukuqala kwe-12V DC
Rotor, iklasi stator coil yokugquma
Umgangatho wamandla ombane
iklasiG3, GB / T2820
Ixabiso lokuhla kwamandla emoto (%)
Ixabiso lokumiselwa kwamandla ombane okwethutyana (%)
Izinga lokulawula umbane elizinzileyo (%)
Ixesha lozinzo lwevolthi
Ukuhla kwenqanaba lokunyuka kwamaxabiso (%)
Rhoqo inqanaba lohlengahlengiso lwethutyana (%)
Rhoqo inqanaba lohlengahlengiso oluzinzileyo (%)
0 ~ 5% (uhlengahlengiso)
Ixesha lokuzinza rhoqo
Ireyithi yokugqwetha ifomathi
Uluhlu lwe-Unit No-load voltage setting range
95% ~ 105% ombane ulinganiswe
Landela iifayile zomatshini
Ukucaciswa kweinjini yedizili
Ukuchazwa kwenye indawo
Idiesel generator isete ufakelo, ukusetyenziswa kunye nokugcinwa kwencwadana
Isatifikethi somgangatho wemveliso
Amanyathelo enkonzo yasemva kwentengiso kunye neendlela
Inkonzo yasemva kokuthengisa yinkampani yokugcina indawo yokugcina iinkonzo, inoxanduva lokulawula umbutho emva kwenkonzo yokuthengisa, enoxanduva lokuthengisa iimveliso kwimakethi yesizwe yolondolozo olukhulu kunye neenkonzo zongxamiseko, umsebenzi wolondolozo ngokubanzi yinkampani kuzo zonke iindawo Iziko lenkonzo yolondolozo lwelizwe linoxanduva lokusingatha;
Bambelela kumgaqo wenkonzo: Okokuqala, thatha inyathelo lokuqala ukuya emnyango, ujongane neengxaki ngexesha; eyesibini impendulo evakalayo kwiingcebiso zomsebenzisi; Okwesithathu, ngokomthetho ukujongana neembambano ezisemgangathweni;
Jongana neposi yomsebenzisi, ubize ixesha, kuyo yonke indawo ngenxa yabasebenzisi;
Yenza ingxelo ngomgangatho wolwazi lomsebenzisi kakuhle, uphumeze ingxelo esemgangathweni, inkqubo yekhadi yokulandelela esemgangathweni;
Ekuthengisweni kweendawo ezixineneyo kumisela amasebe olondolozo lweemveliso, ukwenzela ukuba inkonzo yomnyango ingagqithi kwiiyure ezili-12.
Cacisa umxholo wenkonzo emva kokuthengisa
（1, Ukubonelela ngokusebenza kwemveliso, incwadana yolondolozo;
Parts 2, Ukubonelela ngezixhobo, izixhobo zokusebenza;
Training I-3, uqeqesho lwasimahla kubathengi kunye nokubonelela ngo-1-2 wokugcina umsebenzi wombane;
Ixesha le-4, iwaranti yonyaka omnye okanye iiyure ezili-1000 zomsebenzi (nayiphi na eza kuqala), kukho izikhululo zeenkonzo kwihlabathi liphela ze-IWS (iNkonzo yeWaranti yeHlabathi), zonke iziphene ezibangelwa kukusilela kweeseti zejenreyitha zokuvelisa ngokungqinelana nokuphunyezwa kwewaranti yoqobo , Ukusebenza kwempazamo yomntu okanye ezinye azilandeli usetyenziso lwantlandlolo lweemfuno zolondolozo azikho ngaphakathi kwesiqinisekiso somgangatho.
Ukubonelela abasebenzisi ngokusetyenziswa kwemveliso kunye nolwazi oluphuculweyo kwangexesha.
6） Uxanduva lomthengi ukukhokela ufakelo kunye neemveliso zokulungisa ingxaki;
（7, iimveliso zethu inkampani usebenzisa imodeli yokuthengisa ngqo, ngokwemigaqo yeshishini lokwenziwa kwamazwe aphesheya, ukwenza inethiwekhi yokuthengisa eyomeleleyo kunye nenethiwekhi yenkonzo emva kokuthengisa. Iimveliso zenkampani zingathengiswa kubo bonke abameli beshishini beli malunga nokubonelela ngenkonzo yasemva kokuthengisa. Ukuthengiswa kweemveliso zenkampani kunokwenza iofisi yorhwebo kufutshane ukubonelela ngenkonzo yasemva kwentengiso kwilizwe liphela.
Ukuzibophelela kwenkonzo emva kokuthengisa
Inkampani yethu icinga ukuba iiseti zokuvelisa ezikumgangatho ophezulu kuphela ngenkonzo esemgangathweni emva kokuthengisa, inokuwenza umgangatho wayo ugqibelele. Injongo yeenkonzo zethu yile:
Machine Ⅰ） Umatshini omnye, ifayile enye.
Nje ukuba iyunithi nganye ithengiswe, yinike ukuseka ifayile yekhompyuter, irekhodi eneenkcukacha zedilesi yomthengi, umnxeba, ukusetyenziswa kweeyunithi njalo njalo;
Icandelo ngalinye linerekhodi yokusebenza, linokurekhodwa ngokweenkcukacha ngokusebenza kwemihla ngemihla kweyunithi;
Emva kofakelo kunye nokugunyaziswa kweyunithi efanelekileyo siya kuthi sabele ikhadi lewaranti;
Nika iyunithi nganye uyilo lobuchwephesha bokugcina ulondolozo, ulondolozo lwemihla ngemihla, ulondolozo lobugcisa lokuqala, ulondolozo lobugcisa lwesibini, amanqanaba amathathu olondolozo lobuchwephesha kunye nokusebenza kunye neenkqubo zokugcina, ukulandelela rhoqo;
Team Ⅱ team Iqela lenkonzo yolondolozo lobungcali ekhawulezileyo
Iqela lenkonzo yasemva kokuthengisa yenkampani yingqokelela yeqela elinobuchwephesha beenjineli ezinobungcali, ezixhotyiswe ngezixhobo ezahlukeneyo zokuvavanya, izixhobo zokuvavanya kunye nezixhobo ezizodwa, ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezingama-24.
1. Inkampani yethu ibonelela ngewaranti yonyaka omnye okanye iiyure ezili-1000 zokusebenza (nokuba yeyiphi eza kuqala), ixesha ukusukela kumhla wofakelo lwezixhobo kunye nokulungisa ukubala okuqhelekileyo, Ngexesha lewaranti, enikezelwa yinkampani ejongene nokubeka iiseti ezivelisa idizili iwaranti yobungcali , Ukuqinisekisa imveliso yasekuqaleni yezincedisi;
2. Inkampani yethu ithembise ngokunyanisekileyo: ngexesha lewaranti, ifumene isaziso esibhaliweyo sokusilela kwabathengi, ixesha lokuphendula ulondolozo elingekho ngaphezulu kweeyure ezingama-24, kwiingxaki eziqhelekileyo ezilula, abasebenzi bezobuchwephesha ngonxibelelwano ngomnxeba kunye nomthengi ukukhokela ingxaki; ezinje ngomnxeba. Ukuba awunako ukusombulula ingxaki, abasebenzi bezobuchwephesha ukuya kwelona xesha likhawulezayo baleqisela kwindawo yabathengi ukusombulula ingxaki, ngaphezulu hayi ngaphezulu kweeyure ezingama-24.
3. Ithuba lokuphuma kwewaranti yokunikezela ngeenkonzo zolondolozo lwezibonelelo zoBomi bonke;
4. Abasebenzi bolondolozo rhoqo kulondolozo lweeyunithi zabathengi, ukutshintshwa kwezinto eziqhelekileyo; iqela lezikhalazo rhoqo ukubuza malunga nokusebenza kwecandelo;
(Ⅲ) Uqeqesho lobungcali, inkxaso eyomeleleyo yobugcisa
1. Amaqela enkonzo yasemva kokuthengisa ahlala efumana uqeqesho lobungcali ku-Shandong Weichai, Ji Chai, Shangchai, Cummins, Perkins, MAN, IVECO ， kwaye bafumane isatifikethi sokufaneleka, ukuqeshwa ngezatifikethi.
2. Inkampani yethu inoxanduva lokuqeqeshwa simahla kubathengi abasebenza kwindawo yombane 2-3;
Isiqinisekiso sokubonelela ngezixhobo ezincedisayo
Inkampani yethu kweli lizwe ixhotyiswe ngendawo yokugcina izinto, ebonelelwe kubathengi bezinto ezizezona ngqo zisuka kumgangatho wokuqala ongacwangciswanga, umgangatho ophezulu, kunye nokunikezelwa kwamaxabiso.
Egqithileyo IsiCoci soMoya esiCocayo seDesktop esisiSebenzi yaBantwana, usana, abantu abadala
Okulandelayo: Uphawu loPhawu loMlilo oluDumileyo eOstreliya